Free online ọrụ. Ngụkọta oge nke gburugburu steepụ
Ịgbakọ size nke a gburugburu steepụ
The elu nke n'ọkwá H
Dayameta nke steepụ D1
N'ime dayameta D2
N'akuku nke adiana A
Ngụkọta oge nke gburugburu steepụ
H - The elu nke n'ọkwá
D1 - n'èzí dayameta
D2 - N'ime dayameta
A - n'akuku nke adiana,
Ogologo na gburugburu staircases nzọụkwụ ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 80 cm.
Nzọụkwụ obosara ke Central òkè kwesịrị erughị 20-25 cm na widest akụkụ nke - bụghị ihe karịrị 40 cm. The elu nke na nzọụkwụ nke a gburugburu steepụ nwere ike adị ukwuu karịa nke elu akwadoro maka ruola. Nkịtị nzọụkwụ elu-ese n'elu mmiri na-ewere 16 cm maka ịghasa - 18 cm.
Mgbe ebe ụkwụ etịbe, na helical steepụ nzọụkwụ kwesịrị banyere 25-30 cm na nsọtụ - dịkarịa ala 30-35 cm. Nke a na-omimi ga-eme bụ adaba. Mgbe ahụ ụkwụ mmadụ ga-adị na ogbo na zuru, ọ bụghị nghọta na onu.
Akụkụ kwụpụ gburugburu steepụ.
h - na ogologo nke ogbo
W1 - nzọụkwụ obosara na mbara òkè
W2 - workpiece obosara ogbo
α - imewe n'akuku nzọụkwụ